Brezila : Vokatry Ny Asa Ataon’ny Banky Iraisam-pirenena, Tsy Mahazo Rano Fisotro ireo Vondrom-piarahamonina Ao Sertão de Ceará (Ampahany 1) · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Pública - Agência de jornalismo investigativo Nandika (es) i Julián Ortega Martínez, Nils Loret, Candy
Voadika ny 30 Jona 2015 3:13 GMT
Paulo Sérgio Alves, mpamboly, filohan'ny ISCA Gameleira, maka sary eo amoron'ny tohodrano. Faritra tokony ho dobo rano raha toa ka feno ilay tohodrano, latsaky ny 10% ny haavon'ny rano tamin'ny fotoana nitsidihan'ilay mpanangom-baovao teny an-toerana.
[Raha tsy misy filazàna mifanohitra dia mitondra mankany aminà tranonkala amin'ny teny portiogey ny rohy rehetra ato anatn'ny lahatsoratra (Brezila)]
Ny Agência Pública no namoaka ity lahatsoratra ity ary niarahana namokatra tamin'ny “International Consortium of Investigative Journalists” ho an'ireo andiany Voaroaka sy Tsy raharahaina : ahoana no tsy nanajàn'ny banky iraisam-pirenena ny fanomezan-tokiny hiaro ireo mahantra. Samy manana fifanekena fiaraha-miasa amin'ny Global Voices daholo izy roa ireo. Hamerina hamoaka ity tantara ity aminà andiany telo ny Global Voices.
« Andramo ny rano eto », hoy i Paulo Sérgio de Moraes Alves, 34 taona, filohan'ny ISCA (Institution Socio-communautaire de l'Agro-ville) tamiko. Fikambanan'ireo mponina ao amin'ilay tanàna mivelona amin'ny fambolena “Gameleira” ny ISCA. Nekeko ary dia nikainkona ny lelako. Ranon-tsira tsotra izao ilay izy. « Amin'izao fotoana izao, alaivo sary an-tsaina izany ianao misasa amin'io rano io izany. Maina ny hoditra, isan'ny zavatra tsy zaka izany. Betsaka ny ankizy efa narary », hoy ny fanoheran'i Paulo Sérgio.
Goavana ny fanoherana satria naterak'ireo asa natao hitolomana handresena ny haintany izay namoizan'ny olona, toa an'i Paulo Sérgio, ankoatry ny tranon'izy ireo, dia ny fahafahana mahazo rano fisotro sy herinaratra izay efa nananan'izy ireo talohan'ilay asa fanorenana. Efa ho taona efatra eo izao — vanim-potoana nifanandrify indrindra tamin'ny haintany iray nanana ny tantarany tao amin'ny Fanjakan'i Ceará— nesorina niala ny tranony ny mponina ary nafindra toerana mba hanomezana toerana ilay tohodrano Gameleira, izay any anaty faritra ambanivohitra ao amin'ny fari-piadidian'i Trairi, Itapipoca sy Tururu, 150km miala an'i Fortaleza, ny renivohitry ny Fanjakana. «Taloha izahay niaina teny akaikin'ny ony. Na amin'ny fotoana maintany aza, raha maina ny ony, afaka mba mandavaka vovon-drano izahay. Afaka mampifanaraka ny fiainany amin'izany ny rehetra. Eto izahay terena hampiasa ity rano masira be ity», hoy i Paulo Sérgio manazava.
Gameleira dia iray amin'ireo tohodrano dimy naorina tao anatin'ny andiany faharoa amin'ny PROGERIRH [en] (Tetikasa Fitantanana arahana amin'ireo Tahirin-drano ao amin'ny Fanjakan'i Ceará), tetikasa iray iarahan'ny governemantan'i Ceará sy ny Banky Iraisam-pirenena, izay efa nandritry ny roapolo taona mahery no nanatontosa fandaharan'asa hiadiana amin'ny haintany taoamin'ilay Fanjakana. Ho an'ny andiany voalohany [es] tamin'ny PROGERIRH, ny taona 2000, nampindramin'ny Banky Iraisam-pirenena 136 tapitrisa dolara amerikana ny governemantan'i Ceará. Amin'ity andiany faharoa ity [en], natomboka tamin'ny 2008, 103 tapitrisa dolara amerikana no homen'ny banky ho an'ilay fandaharan'asa.
Ho an'ny fanorenana ny tohodrano Gameleira, 40 tapitrisa reals no nilaina (ka 18 tapitisa novatsian'ny Banky Iraisam-pirenena ary an'ny Fanjakana tao Ceará ny ambiny, araka ny nambaran'ny governemantam-panjakana). Tamin'ireo fianakaviana 180 nidonan'ireo asa, araka ny angon-drakitry ny (SRH) Sekretarià misahana ny Otrikarena momba ny Rano, 91 no nonina teo an-toerana ary namoy, farafahakeliny, ampahany tamin'ny tanin'izy ireo ; marobe ireo namoy tanteraka ny taniny. Efa ho taona efatra aty aoriana, ny hany rano azon'izy ireo sotroina dia ity vovon-drano nasainy nandramako ity.
Misy fitaovana iray fanalàna sira, saingy tsy vita ny hanàla sira ny rano afa-tsy 25% amin'ny rano ampiasaina isanandro eo ho eo ihany. « Raha tsy izany, ho faty ilay milina kely ao amin'ny vovon-drano izay efa nanao ny nataony», hoy i Paulo Sérgio. Voatery mifandimby ilay vondrom-piarahamonina : manan-jo hahazo rano 36 litatra isaky ny fianakaviana mba ho an'ny filàny andavanandro (araka ny voalazan'ny Firenena Mikambana, 110 litatra isan'olona isan'andro no ilaina) ary ao ireo fianakaviana no misy hatramin'ny olona folo. Ampiasaina ho an'ny sakafo sy ny hosotroina ilay rano sarobidy avy nesorina ny sirany. « Mikiky ny savony manontolo ny sira. Savony lava iray manontolo no ilaina aty raha hanasa akanjo iray. Io rano io no hany mba fanananay rehetra », hoy i Maria Gorete Rodrigues de Souza, 48 taona, mpamboly.
Voafetra ihany ny fatran-drano omen'ilay vovon-drano ao amin'ilay tanàna mivelona amin'ny fambolena. 36 litatra isanandro no rano fisotro azon'ny mponina ampiasaina. Sary : Ciro Barros/Agência Pública CC-BY-ND.
Ireo fepetra natolotra ho an'ny famindran-toerana ilay vondrom-piarahamonina ao amin'ilay tanàna mivelona amin'ny fambolena ao Gameleira dia manitsakitsaka mivantana ireo fepetra tsy maintsy arahana napetraky ny Banky Iraisam-pirenena mba hampihenàna ny dona ara-tsosialy, ara-tontolo iainana sy toekarena amin'ireo vondrom-piarahamonina iantraikàn'ireo tetikasa fampandrosoana izay vatsiany vola. Isan'ireny ny Directive Opérationnelle 4.30 [en], napetraka tamin'ny 1 Jona 1990, manindry fa « dinihana manokana ireo vondron'olona tena mahantra indrindra ho afindra toerana» ary efa manomana ny hoe « izay rehetra famindran-toerana tsy araka ny sitrapo dia tokony harafitra sy tanterahana toy ny fandaharan'asa iray ho fampandrosoana, izay hanome ireo vahoaka nafindra toerana ny vintana sy ny fitaovana rehetra sahaza mba hisitrahany ny tombony avy amin'ilay tetikasa».
Io taridàlana io ihany no manipika fa ny famindràn-toerana « dia tsy maintsy miantoka ireo fitaovana rehetra sahaza ho an'ny fampiantranoana, ny fotodrafitrasa (famatsiana rano, làlana hivezivezena) sy ireo tolotra sosialy (sekoly, toeram-pitsaboana) ». Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny ICIJ, [International Consortium of Investigative Journalists] teo anelanelan'ny 2004 sy 2013 dia Breziliana 10 094 raha kely indrindra no niharam-pahavoazana ratsy tamin'ireo tetikasa novatsian'ny Banky Iraisampirenena vola, very trano, tany na asa. Faritana manokana amin'izany ireo tetikasa natao hiadiana amin'ny haintany tao Ceará napetraka hatramin'ny fiandohan'ny1990, nandona fianakaviana 4.625 ireo asa novatsian'ny banky iraisam-pirenena. Ary, sahàla amin'ny iray anehoan'ireo olona nafindra toerana tao Gameleira azy, tsy voahaja mandrakariva ireo fepetra natao ho fiarovana.
Ny Tohodrano Gameleira sy ny Banky Iraisam-pirenena ao Ceará
Hatramin'ny taona 90, ny Banky Iraisam-pirenena no mamatsy vola ireo fandaharan'asa ao Ceará, toy ny PROURB (Tetikasam-pampandrosoana an-tanàn-dehibe sy Fitantanana ireo Tahirin-drano), narahan'ireo dingana roa tamin'ny PROGERIRH nandritra ireo ampolon-taona nanaraka azy. Ny tanjona dia ny hanentana ny fampandrosoana ireo fotodrafitrasa momba ny rano ao Ceará (miaraka amin'ny fanorenana tohodrano, lakandrano sy tambajotra fampifandraisana ireo dobondrano ho fitsinjarana izany) ary ny fanofanana andianà teknisiana hanara-maso ilay rafitra, izay tsy maintsy hanome ny rano natao ho jifain'ny olona sy ny fampandrosoana ara-toekarena.
Iankinan'ireo tetikasa ireo —na tokony niankinany— tsy hoe fotsiny ny asa natao, fa koa ny fahombiazan'ny fitantanana ireo tahirin-drano, araka ny fanazavan'ny profesora mpampianatra momba ny injenierian'ny rano sy ny tontolo iainana ao amin'ny Anjerimanontolo Federalin'i Ceará, Francisco Assis de Souza Filho, tale fahiny tao amin'ny fandrindràna teknika ny COGERH (Compagnie de Gestion des Ressources Hydriques) ary tomponandraikitra amin'ny fandrindrana teknika ireo tetikasan'ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ny andiany voalohan'ny PROGERIRH, sy ireo fandaharan'asa tranainy be toy ny PROURB sy Proágua. « Ao amin'ny asa fanorenana ireo fotodrafitrasa no tena misy ny fampiasam-bola goavana. Saingy misy lojika tsy miova ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny fitantanana ireo tahirin-drano, indrindra fa manomboka amin'ny fananganana ireo rantsam-mangaika ara-panjakana, lalàna sy fitantanana. Ny hita miseho amin'ireo tetikasan'ny Banky Iraisam-pirenena dia, amin'ny lavitra ezaka, io fahafahana ara-panjakana hifehy ny tahirin-drano io no ahitàna ny fahasamihafàna/fahaiza-manaony », hoy izy. Ho azy, lasitra iray i Ceará ankehitriny raha resaka fitantanana tahirin-drano any aminà toerana somary hay Fanambaràna somary sarotra ekena ihany ho an'ireo mponina ao Gameleira.
Ny lalàna breziliana ho an'ny Politikam-Pirenena momba ny Tahirin-dRano (9 433 tamin'ny 8 Janoary 1997) dia mametraka fa « amin'ny fotoana tsy fahampiana, dia ny hosotroin'ny olona sy ny ho an'ny biby fiompy no lohalaharana amin'ny fampiasàna ny tahirin-drano». Saingy ny tsy fahampian'ny fitsinjarana izany fahafahana mahazo rano izany amin'ny fomba demaokratika no olana fototra amin'ny fitantanana ny tahirin-drano ao Ceará araka ny lazain'ireo ONG sy ireo hetsika sosialy ao an-toerana. Marcos Vinicius Oliveira, filohan'ny ONG Esplar (Toeram-pikarohana sy Fanoroana Hevitra), izay hatramin'ny 1974 no miasa manohana ny fambolena miahy ny tontolo iainana sy ny fambolena isam-pianakaviana ao amin'ilay Fanjakana, dia manazava fa : « ny rano ho an'ny fambolena indostrialy dia tokony ho tataovana hetra, nefa amin'ìzao fotoana izao dia toy ny maimaim-poana izany. Tsy tokony ho naorina akory ireo sinibe goavana ; tokony ho sinibe salantsalany maromaro no naorina, na mipetraka manamorona ireny dobondrano ireny mba hanamoràna ny fahazoana rano ho an'ireo vondrom-piarahamonina ».
Ny vokany dia « ireo tena mizaka marina ny haintany », ireo fianakaviana izay miaina any amin'ny faritra ambanivohitra sy manome ny 50% amin'ny mponina any Nordeste breziliana, no tsy afaka mahazo rano, araka ny fanamafisan'i Cristina Nascimento, avy amin'ny ASA (Fandrindrana asa any amin'ny faritra somary hay ao Brezila), tambajotran'ireo fikambanana fiarahamonina sivily. « Marihitra be ny rano ary tsy tonga any amin'ireny toerana ireny. Tokony hiadiantsika hevitra ny momba ny fitsinjarana ara-demaokratika ny fahazoana io rano io», hoy i Cristina.
«Takian'ny fiaraha-miaina any amin'ny faritra somary hay ny fiantohana ny rano, zavatra tena ilain'ny fianakaviana monina any amin'ireo faritra lavitra any ambanivohitra. Mila rano koa ny tanan-dehibe, saingy ireny asa ireny dia tsy nosainina mandrakariva niainga avy aminà drafitra tena voavolavola tao anaty fomba fijery mibanjina ny olona rehetra », hoy izy manazava amin'ny fitanisàna ny raharaha momba ny tohodrano Gameleira, izay mipetraka ao afovoan'ny faritra iray ambanivohitra kanefa dia tsy ahafahan'ny vahoaka mahazo rano. « Vita tamin'ny 2013 io tohodrano io, tena tao anaty haintany tanteraka, nitazona hadirin-drano nisinisy ihany izy [izay] natao ho an'ny faritra an-drenivohitr'i Itapipoca, izay zava-dehibe ihany koa. Saingy tsy mbola misy foana tetikasa nofaranana—misy tsara mihitsy ny hevitra hanaovana tatatra mitondra rano ho an'ireo fianakaviana tambanivohitra monina eto, saingy tsy notanterahana », hoy izy.
Nandika (es) i Julián Ortega Martínez
Nandika (fr) i Nils Loret